Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) - Lovemụaka Love - Bl - Man Man
Ezigbo ego nkezi 3.9 / 5 si 15
NA / A, o nwere ihe nlere 41.5K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, fantasy, manga, Akwụkwọ ntanetị, Yaoi
Anklọ akwụkwọ sekọndrị kwụsịrị Hank Yan nwere ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ. Yingmụ ihe, ibi ndụ na-asọ asọ kwa ụbọchị, na iti ndị na-eme ihe ike ihe dịka dike na-amụ anya?! Otu ụbọchị, Hank zọpụtara otu nwa okorobịa aha ya bụ Junior.
Ihere na ahụhụ site na ọchịchịrị gara aga nke mmegbu, Junior dị ka Hank. Ha abụọ enweghị nne na nna, ọ bụrụ na ha dị ndụ ma ọlị, ha abụọ nwere mmasị na ibe ha. Ọ bụ chioma na ha zutere ka ọ bụ… akara aka?
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ bl manga
Chapter 141 February 11, 2022
Chapter 140 February 11, 2022
Chapter 137 December 16, 2021
Chapter 136 December 16, 2021
Chapter 135 December 16, 2021
Chapter 134 December 16, 2021
Chapter 133 December 16, 2021
Chapter 132 December 16, 2021
Chapter 131 December 16, 2021
Chapter 130 December 16, 2021
Chapter 129 December 16, 2021
Chapter 128 December 16, 2021
Chapter 127 December 16, 2021
Chapter 126 December 16, 2021
Chapter 125 December 16, 2021
Chapter 124 December 16, 2021
Chapter 123 December 16, 2021
Chapter 122 December 16, 2021
Chapter 121 December 16, 2021
Mkpụrụ nke Ire